ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအသုံးပြုသောလိင်ကွဲလိင်တူချစ်သူကျောင်းသားများနှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအတွက်ဘက်လိုက်မှု (ချဉ်းကပ်မှု) ကိုချဉ်းကပ်ပါ (2019) - Your Brain On Porn
J ကိုပြုမူနေစွဲ။ 2019 ဇွန် 1; 8 (2): 234-241 ။ Doi: 10.1556 / 2006.8.2019.31 ။
Sklenarik S က1, Potenza MN2,3,4, Gola M က5,6, Kor တစ်ဦးက7, Kraus SW8,9, Astur သည် RS1.
သူတို့ချဉ်းကပ်မယ့်အစားစွဲလမ်းလှုံ့ဆော်မှုကိုရှောင်ကြဉ်မထွက်ရစွဲတစ်ဦးချင်းစီကိုမကြာခဏ, စွဲ-related လှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်အတော်လေးအလိုအလျှောက်အရေးယူသဘောထားတွေကိုသရုပ်ပြပါ။ ဒီလေ့လာမှုကခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုညစ်ညမ်း အသုံးပြု. သတင်းပို့သူကိုလိင်ကွဲကောလိပ်-အသက်အထီးအကြားတည်ရှိခြင်းရှိမရှိအကဲဖြတ်။
ကျနော်တို့သင်တန်းသားများကိုပုံရိပ်ကိုတိမ်းညွတ်ဖို့တုန့်ပြန်နေတဲ့ Joystick တွန်းသို့မဟုတ်ဆွဲထုတ်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပြီးသောစဉ်အတွင်းခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုအလုပ်သမားတစ်ဦးချဉ်းကပ်-ရှောင်ရှားခြင်းလုပ်ငန်းတာဝန်, အသုံးပြု. 72 အထီးဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ချဉ်းကပ်မှုနှင့်ရှောင်ရှားခြင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုတူအောင်ဖန်တီးရန်, Joystick ဆွဲ image ကိုကျယ်စေနှင့်ပုံရိပ်ကိုကျုံ့တွန်းအားပေး။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြိမ်နှုန်းနှင့်ပြင်းထန်မှုတစ်ဦးအကျဉ်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ Screener နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုစကေး (PPUS) သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။
သင်တန်းသားများကိုကြားနေလှုံ့ဆော်မှုနှိုင်းယှဉ်ပါကခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်သိသာထင်ရှားသောချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုသရုပ်ပြနှင့်သိသိသာသာညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုကိုအတိုင်းအတာဆက်နွယ်နေကြောင်းဒီချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှု။ Non-ပြဿနာသည်အသုံးပြုသူများကိုပြု၏ထက်ထိုမှတပါး, ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကို (PPUS အားဖြင့်ခွဲခြားကဲ့သို့) ပိုပြီးနှစ်ဆထက်ချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုပြသခဲ့သည်။
KEYWORDS: စွဲ; ချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှု, ရှောင်ရှားခြင်း, သိမြင်မှုဘက်လိုက်မှု, ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း
အစာစားချင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုများ (ဥပမာ - အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်ဆက်စပ်သောဆေးပုံများ) ၏တုံ့ပြန်မှုများကိုအခြေခံသည့်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များကိုလေ့လာခြင်းသည်စွဲလမ်းစေသောရောဂါများကိုအရေးကြီးသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးပြီး၊ (Field & Cox, 2008) ။ မသိစိတ်တစ်ပိုင်းသိမြင်ဘက်လိုက်မှုနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေအကြားအသင်းအဖွဲ့များ Joystick တာဝန်များကိုအပါအဝင်နည်းလမ်းများအမျိုးမျိုးအလုပ်သမား Cross-Section နှင့်အလားအလာစမ်းသပ်ဒီဇိုင်းများ, အသုံးပြု. တွေ့ပါပြီ (Cousijn, Goudriaan, & Wiers, 2011; Krieglmeyer & Deutsch၊ ၂၀၁၀; Wiers, Eberl, Rinck, Becker, & Lindenmeyer, 2011), စီးပွားရေးနှိုးဆွမှု-တုံ့ပြန်မှု compatibility (src) တာဝန်များကို (Field, Kiernan, Eastwood, & Child, 2008; Krieglmeyer & Deutsch၊ ၂၀၁၀), နှင့်အမြင်အာရုံ-စုံစမ်းစစ်ဆေးတာဝန်များကို (Mechelmans et al ။ , 2014; Pekal, Laier, Snagowski, Stark, & Brand, 2018; Schoenmaker, Wiers, Jones, Bruce, & Jansen, 2007) ။ အစိတ်အပိုင်းအတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးသဘောထားတွေကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါအရာသိမြင်ဘက်လိုက်မှုတို့အကြားဆက်စပ်မှု, သင်ယူအသင်းအဖွဲ့များနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ (အဟောင်းကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကနေအရွယ်ရောက်အထိအသက်အရွယ်အုပ်စုများအတွက်နှစ်ဦးစလုံးလက်တွေ့နှင့် Non-လက်တွေ့လူဦးရေအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိပြီStacy & Wiers, 2010).
စွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်တစ်ဦးက key ကိုသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်ကိုချဉ်းကပ်ဘက်လိုက်မှုဖြစ်ပါသည်, ဒါမှမဟုတ်အတော်လေးအလိုအလျှောက်အရေးယူသဘောထားကိုခန္ဓာကိုယ်ဆီသို့အချို့လှုံ့ဆော်မှုရွှေ့ဖို့ (ဒါမှမဟုတ်အချို့လှုံ့ဆော်မှုဆီသို့ခန္ဓာကိုယ်ရွှေ့ဖို့) ထက်ဝေးကနေ (Field et al ။ , 2008) ။ စွဲလမ်း၏ dual-အပြောင်းအလဲနဲ့မော်ဒယ်များအဆိုအရ, စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကို "ထကြွလွယ်သော" စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်နှင့်တစ်ဦးစည်းမျဉ်းအလုပ်အမှုဆောင်စနစ် (တစ်ဦးအစာစားချင်စိတ်များအကြားတစ်ခုအချိုးမညီမျှမှု၏ရလဒ်အဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးCousijn et al ။ , 2011; Stacy & Wiers, 2010; Wiers et al ။ , 2007; Wiers, Rinck, Dictus, & van den Wildenberg, 2009) ။ အဆိုပါအစာစားချင်စိတ်စနစ် (လှုံ့ဆျောမှုအရေးပါမှုအပေါ်အခြေခံပြီးလှုံ့ဆော်မှုအကဲဖြတ်ဖို့တစ်ဦးချင်းစီဦးတည်သွားစေနဲ့စွဲလမ်းလှုံ့ဆော်မှုချဉ်းကပ်ရန်အလိုအလျှောက်အရေးယူသဘောထားတွေ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါအရာအာရုံကိုများနှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဇီဝကမ္မလုပ်ငန်းစဉ်များ, mediatesBradley, Codispoti, Cuthbert, & Lang, 2001; Wiers et al ။ , 2009) ။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေအတွက်ထပ်ခါတစ်လဲလဲနဲ့ရွေ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုတစ်ပြိုင်နက်အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် Impulses သတင်းပို့ထိန်းညှိရန်အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုအားနည်း, အစာစားချင်စိတ်တုံ့ပြန်မှုအားကောင်းလာစေရန်မည် ပေါင်းလဒ်အတွက်စွဲ-related အပြုအမူတွေ (အများအားဖြင့်အသိအမြင်ပြင်ပ, အမြန်အင်အားစိုက်ထုတ်, ထိန်းချုပ်မှုရန်ခက်ခဲများနှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ဖြစ်လာပေမည်Stacy & Wiers, 2010; Tiffany & Conklin, 2000; Wiers et al ။ , 2007).
အမှန်စင်စစ်ချဉ်းကပ်ဘက်လိုက်မှုကွဲပြားခြားနားသောစမ်းသပ်ချဉ်းကပ်မှုသုံးပြီးမျိုးစုံစွဲလမ်းအပြုအမူအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ။ ဥပမာအားဖြင့်, Field et al ။ (2008ယင်းချဉ်းကပ်မှု-ရှောင်ရှားခြင်းလုပ်ငန်းတာဝန် (AAT) ဆင်းသက်လာသောအနေဖြင့် - -) တစ်ဦး src တာဝန်အသုံးပြုသော) ထိုမိုးသည်းထန်စွာသောက် (သို့သော်အလင်းကိုမသောက်သရုပ်ပြဆီသို့ထက်ဝေးအရက်လှုံ့ဆော်မှုများမှတစ်ဦး manikin ရွှေ့ဖို့ပိုမြန်ကြသည်။ အဆိုပါ src တာဝန်များကိုလည်း (ဆေးရွက်ကြီးဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်ချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြBradley, Field, Mogg, & De Houwer, 2004) နှင့်ပုံမှန်ဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများက (Field, Eastwood, Mogg, & Bradley, 2006) ။ အလားတူပင် Wiers et al ။ (2011) တစ်ဦးအရက်-AAT ကာလအတွင်းမိုးသည်းထန်စွာသောက်အရက်ဓါတ်ပုံတွေကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းထက်ချဉ်းကပ်ဖို့ပိုမြန်ပေမယ့်မပေး Non-အရက်-related လှုံ့ဆော်မှုကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ (မြေတပြင်လုံးတွင်ဤလေ့လာမှုများစွဲတစ်ဦးချင်းစီချဉ်းကပ်တုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူမူးယစ်ဆေး-related တွေကိုတုံ့ပြန်လေ့ကြောင်းအကြံပြုနှင့်ထိုကဲ့သို့သောတွေကိုထို့ကြောင့်မကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်အတွက်ချဉ်းကပ်လိုတဲ့သဘောထားကိုထုတ်ယူစေခြင်းငှါField et al ။ , 2008).
ထို့အပြင်ချဉ်းကပ်ဘက်လိုက်မှုများဖြစ်နိုင်သည်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုထိန်းသိမ်းထားတဲ့စွဲ -oriented စိတ်ခွန်အားနိုးမှုစနစ်ဖန်တီးရန်, ထိုကဲ့သို့သောအာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုနှင့်အကဲဖြတ်ဘက်လိုက်မှုကဲ့သို့သောအခြားသိမြင်ဘက်လိုက်မှုနှင့်အတူအပြန်အလှန်။ စွဲလမ်းသူများသည်အလိုအလျောက်ချဉ်းကပ်နည်းများကိုပြသခြင်းအပြင်စွဲသူများသည်၎င်းတို့ထံအထူးသဖြင့်တက်ရောက်ခြင်း (ဆိုလိုသည်မှာသူတို့ကိုကြည့်ရှုခြင်းအတွက်အချိန်ပိုသုံးခြင်း) အပြင်၎င်းတို့အားအခြားရရှိနိုင်သည့်အချက်များထက်ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်နှိုးဆွခြင်းအဖြစ်အကဲဖြတ်ရန်အကြံပြုသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် (Cousijn et al ။ , 2011; Field & Cox, 2008; Stacy & Wiers, 2010) ။ ဤအဘက်လိုက်မှု၏အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်သည့်မက်လုံးပေးာင်းစွဲ-related တွေကိုများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခု hypersensitivity သည်ဤတွေကိုတစ်ခုအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုထုတ်လုပ် posits ထားတဲ့သီအိုရီသည်, စွဲလမ်းအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပြဿနာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ချဉ်းကပ်အပြုအမူတွေ၏ activation အားဖြင့် elucidated ဖြစ်ပါတယ် (Stacy & Wiers, 2010) ။ ပြင်းထန်စွာ, စွဲ-related တွေကိုများအတွက်ဦးစားပေးအာရုံစိုက်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့ထပ်တလဲလဲနေကြပြီး relapse ၏အလားအလာအန္တရာယ်အပြင်, ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်၏ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပြင်းထန်မှုများအရေအတွက်နှင့်ကြိမ်နှုန်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်; ဒီသက်ရောက်မှုကို (အရက်, ဆေးလိပ်, ဆေးခြောက်, opiates နှင့်ကိုကင်းများ၏သုံးစွဲဖို့လေးစားမှုနှင့်အတူတွေ့ရှိရထားသည်Field & Cox, 2008; Schoenmaker et al ။ , 2007) ။ ထို့ကြောင့်သိမြင်ဘက်လိုက်မှု, ပြဿနာလှုံ့ဆျောမှုနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအပြန်အလှန်ပေါ်လာပါသည်။
အချက်အလက်များအရအမူအကျင့် (သို့) ပစ္စည်းမဟုတ်သောစွဲလမ်းမှုများ (ဥပမာ၊ လောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာရောဂါ) သည်အခြေခံအင်္ဂါရပ်များနှင့်ယန္တရားများကိုမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်အတူမျှဝေသည်ဟုဖော်ပြသည် (Grant, ဘရူ, & Potenza, 2007; Grant, Potenza, Weinstein, & Gorelick, 2010) ။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုသည်ဖြစ်ရပ်များ (ဥပမာသည်းခံစိတ်နှင့်ဆုတ်ခွာခြင်း)၊ သဘာဝသမိုင်း၊ စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်ဆက်စပ်နေခြင်း၊ မျိုးရိုးဗီဇပံ့ပိုးမှုများ၊ neurobiological ဆက်စပ်မှုများ၊Grant et al ။ , 2010; Petri, 2015; Potenza, 2006) ။ အမူအကျင့်စှဲကိုလည်း (လျော့နည်းသွားအမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှု, အစာစားချင်စိတ်တဏှာနှင့်အခက်အခဲများပြန်ဖြတ်တောက်သို့မဟုတ်ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များသော်လည်းစွဲလမ်းအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရပ်တန့်အပါအဝင်ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူအခြားအလက်တွေ့ features တွေ, ဝေမျှGrant et al ။ , 2007, 2010).
ထို့ကြောင့်သိမြင်ဘက်လိုက်မှု (အမူအကျင့်များနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာနှစ်ဦးစလုံးစှဲ်ပတ်သက်နေကြပြီPotenza, 2014) ။ ဥပမာအားဖြင့်, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ ventromedial prefrontal cortical ပံ့ပိုးမှုများကိုနှငျ့ပတျသကျသောတာဝန်များကိုအပေါ်လောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်ချိတ်ဆက်ပိုပြီးတသမတ်တည်းတွေ့ရှိချက် (အားလုံးကိုလေ့လာမှုများ, အချို့အတွက်ပိုမိုမြင့်မားယူမှုကိုအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတိုင်းအတာအပေါ်ပိုပြီးညံ့ဖျင်းဖျော်ဖြေပေမယ်ကြပြီမဟုတ်Grant et al ။ , 2007; Lawrence, Luty, Bogdan, Sahakian, & Clark, 2009; Potenza, 2014, 2017) ။ ventromedial prefrontal cortical ဖြစ်စဉ်များအကြိုးရလာဒ်များနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း processing အတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီအဖြစ် (Leeman & Potenza, 2012; Potenza, 2017), ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်သူတို့အားအလားတူသိမြင်ဘက်လိုက်မှုကအခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်းထဲမှာပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပေမည်။
ယနေ့အထိစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများကိုဖော်ပြသည့်အဓိက nomenclature စနစ်များ (ဆိုလိုသည်မှာပဉ္စမထုတ်ဝေမှု) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ် နှင့်ရောဂါများ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး (ICD-11)] ၏ 11th ထုတ်ဝေသာ (လောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော Non-ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းမှုကိုသတ်မှတ်Petri, 2015; Potenza, 2018) ။ ညစ်ညမ်းနှင့်အခြား compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်း (အမူအကျင့်စွဲလမ်းအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားဘို့အဆိုပြုနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းနှင့်အတူ neurobiological နှင့် neurocognitive features တွေ share ကြပြီGola & Draps, 2018; Kowalewska et al ။ , 2018; Stark, Klucken, Potenza, အမှတ်တံဆိပ်, & Strahler, 2018), compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ ICD-11 (တစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ်အဆိုပြုပြီးပါပြီပေမယ့်Kraus et al ။ , 2018) ။ လက်ရှိအချိန်တွင်ပိုမိုသုတေသနမကြာခဏသို့မဟုတ်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာနှင့်အတူတူညီသို့မဟုတ်အခြားစွဲလမ်းအပြုအမူတွေကနေကွဲပြားခြားနားမှုပြစေခြင်းငှါဖို့သောအတိုင်းအတာအထိဆနျးစစျဖို့လိုတယျ။ စမ်းသပ်ဆဲဒီဇိုင်းများ၏အသုံးပြုမှုကိုလက်တွေ့ features တွေသို့မဟုတ်မကြာခဏညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူသဘောထားတွေကိုထိနျလငျးကကူညီလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဆက်စပ်စေခြင်းငှါခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုထိုကဲ့သို့သောဘက်လိုက်မှုမှညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အတိုင်းအတာကိုအသုံးပြုဖို့သူအကောလိပ်-အသက်အထီးအကြားတည်ရှိခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုကောလိပ်-အသက်တစ်ဦးချင်းစီအကြားတစ်ဦးပျံ့နှံ့နေတဲ့အပြုအမူဖြစ်ပါတယ်။ Giordano နှင့် Cashwell (2017) ကောလိပ်ကျောင်းသားများ 43.1% အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်ပါတ်ညစ်ညမ်းရှုမြင်ကြောင်းအစီရင်ခံစာ, ဤအကျောင်းသားများ 10% ကျော်ကျဘာစွဲများအတွက်စံတွေ့ဆုံရန်။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု (အဟောင်းလူဦးရေနှိုင်းယှဉ်ငယ်ရွယ်သောအတွက်နှင့်အမျိုးသမီးထက်ပိုပြီးယောက်ျားပိုမိုပျံ့နှံ့ဖြစ်ပါသည်ဘရောင်း, Durtschi, ကာရိုး, & Willoughby, 2017) ။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအနှုတ်လက္ခဏာရလဒ်များတွင်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ (ဥပမာ၊ ကွန်ဒုံးမရှိသောလိင်)၊ ဆက်ဆံရေးမကောင်းသောရလဒ်များ၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်လိင်နှင့်ဘဝကျေနပ်မှုလျှော့ချခြင်းတို့ဖြစ်သည်။Braithwaite, Coulson, Keddington, & Fincham, 2015; Schiebener, Laier, & အမှတ်တံဆိပ်, 2015; Wright, Tokunaga, & Kraus, 2016) ။ ယင်းအသုံးပြုနိုင်စွမ်း, ရရှိနိုင်မှုနှင့်ညစ်ညမ်း၏တတ်နိုင်စဉ်းစား (Cooper က, Delmonico, & Burg, 2000) နှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များကိုလည်းမအလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာမအပြည့်အဝမြီးကောင်ပေါက်သို့မဟုတ်ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းငှါအချက်ကို (Chambers, တေလာ, & Potenza, 2003), ကောလိပ်လူဦးရေပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမြင့်မားသောအန္တရာယ်မှာဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဒါဟာအလားတူသိမြင်မှုယန္တယားပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းထဲမှာလည်ပတ်ကြောင်းဖွယ်ရှိပုံရသည်။ အမှန်စင်စစ်အများအပြားလေ့လာမှုများ (compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသူကိုတစ်ဦးချင်းစီနှစ်ဦးစလုံးအာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုပြသသောအကြံပြုMechelmans et al ။ , 2014) နှင့်ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ချဉ်းကပ်-ရှောင်ရှားလိုတဲ့သဘောထားကို; သို့သော်အဆုံးစွန်အပေါ်တွေ့ရှိချက်များရောနှောလျက်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Snagowski နှင့်အမှတ်တံဆိပ် (2015) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်အတူတစ် AAT ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်ဘာစွဲပိုပြီးရောဂါလက္ခဏာတွေ Self-သတင်းပေးပို့သူကိုတစ်ဦးချင်းစီချဉ်းကပ်မှုသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှုရှောင်ရှားရန်ဖြစ်စေတော်မှာပေမယ့်မပေးကြားနေလှုံ့ဆော်မှုသော။ လေ့လာတွေ့ရှိ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် သာ. ကြီးမြတ် symptomology ပိုပြီးချဉ်းကပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းထိုကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ချဉ်းကပ်-ရှောင်ရှားလိုတဲ့သဘောထားကိုအကြား linear ကြားဆက်ဆံရေးထက် curvilinear ညွှန်ပြ or (သဘောထားတွေ avoidance နှင့်အလယ်အလတ် symptomology မဟုတ်ပါဘူးSnagowski & အမှတ်တံဆိပ်, 2015) ။ ဆနျ့ကငျြ, Stark et al ။ (2017) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းနှင့်အတူပြုပြင်မွမ်းမံထားတဲ့ AAT အပေါ်ပြဿနာကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ချဉ်းကပ်-ရှောင်ရှားခြင်းရမှတ်များအကြားတစ်ခုသာအပြုသဘော linear ဆက်ဆံရေးမျိုးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင်တစ်ဦး neuroimaging လေ့လာမှုအတွက်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီငွေကြေးအကျိုးအမြတ်ခန့်မှန်းသူတို့အားထက်ခေါ်ဆောင်သွားဓါတ်ပုံတွေကိုခန့်မှန်းတွေကိုမှပိုမြန်တုံ့ပြန်, ဤလျင်မြန်စွာ-တုံ့ပြန်မှုသဘောထားကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏လက်တွေ့ရောဂါလက္ခဏာများ၏ ventral striatum နှင့်ပြင်းထန်မှုများအားကောင်းစုဆောင်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ hypersexuality (Gola et al ။ , 2017) ။ ဘာစွဲဆီသို့သဘောထားတွေကိုလည်း (ကြားနေနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများပတျသကျတဲ့ multitasking ကိုအခွအေနေကိုကျော်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအားထုတ်အခက်အခဲများနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြSchiebener et al ။ , 2015) ။ ဤရွေ့ကားဒေတာချို့ယွင်းထိန်းချုပ်မှုပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်းထဲမှာရှိသကဲ့သို့ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အတူတူယူပါကခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်သိမြင်ဘက်လိုက်မှုပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, အသုံးပြုခြင်း၏ပြင်းထန်မှုနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္တဏှာ ( ဆက်စပ်. ၌တွေ့စေခြင်းငှါယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ပုံရသည်Mechelmans et al ။ , 2014; Snagowski & အမှတ်တံဆိပ်, 2015; Stark et al ။ , 2017).
ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူပြုပြင်မွမ်းမံထားတဲ့ AAT သုံးပြီးညစ်ညမ်းလောင်သူကိုအထီးကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားချဉ်းကပ်ပုံနှင့်ရှောင်ရှားလိုတဲ့သဘောထားကိုတိုင်းတာရန်ရည်ရွယ်ဒီလေ့လာမှုက; အဆိုပါ Joystick AAT အပေါ်လက်မောင်းနှင့် extension flexion နှင့်အတူဒွန်တွဲသည့်ချုံ့ချဲ့အင်္ဂါရပ် (လက်တွေ့ကျကျချဉ်းကပ်မှုနှင့်ရှောင်ရှားလိုတဲ့သဘောထားကိုတူအောင်ဖန်တီးစေခြင်းငှါCousijn et al ။ , 2011; Wiers et al ။ , 2009) ။ ကြိုတင်တွေ့ရှိချက်များ၏အခြေအနေတွင်တှငျကြှနျုပျတို့ညစ်ညမ်း အသုံးပြု. သတင်းပို့သူကိုအထီးကောလိပ်ကျောင်းသားများကနှိုင်းယှဉ်ခေါ်ဆောင်သွားကြားနေလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုဖော်ပြရန်နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအစီအမံချဉ်းကပ်၏ဘွဲ့နှင့်ဆက်စပ်သောမည်ဖြစ်ကြောင်းမယ်လို့တွေးဆ။
ကော်နက်တီတက္ကသိုလ် (= 19.5 နှစ်ပေါင်းပျှမ်းမျှအသက်, ကနေခုနစ်ဆယ်နှစ်ယောက်အထီးဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများကို SD = 2.4) အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများကိုမိမိကိုယ်မိမိဖော်ထုတ်သောစိတ်ပညာဌာန၏အွန်လိုင်းပါ ၀ င်သူအစုအဝေးမှစုဆောင်းခံခဲ့ရသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုက်နှစ်သက်မှုကို Kinsey စကေးမှမေးခွန်းတစ်ခုကို အသုံးပြု၍ အကဲဖြတ်သည်။Kinsey, Pomeroy, & Martin, 1948/1988) ။ သင်တန်းသားများကို၎င်းတို့၏ပါဝင်မှုများအတွက်လူတန်းစားအကြွေးကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှု Connecticut တက္ကသိုလ်မှာ Institutional ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
သင်တန်းသားများကိုကွန်ပျူတာများ၏ရှေ့မှောက်၌ထိုင်ခြင်းနှင့်ကြိုတင်တစ်ဦးကွန်ပျူတာ AAT ဖျော်ဖြေဖို့မေးခွန်းလွှာကိုဖြည့်ဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။ မေးခွန်းအကြိမ်ရေနှင့်ပြင်းထန်မှုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအဖြစ်ညစ်ညမ်းဆီသို့သဘောထားတွေအကဲဖြတ်။ အကြေးခွံအဆိုပါပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုစကေး (PPUS) နှင့်အကျဉ်းချုပ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ Screener (BPS) ပါဝင်သည်, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သဘောထားတွေများကိုတွက်ချက်နှစ်ဦးစလုံး၏။ အဆိုပါ PPUS (Kor et al ။ , 2014) "ကနေအထိတစ်ဦး 12-အမှတ် Likert စကေးပေါ်တွင်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကျော်က၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြန်ချက်များအကဲဖြတ်ရန်တစ်ဦးချင်းစီကမေးတယ်တဲ့ 6-ကို item စကေးဖြစ်ပါသည်စစ်မှန်တဲ့ဘယ်တော့မှ"ရန်"နီးပါးအမြဲစစ်မှန်တဲ့။ (ကျနော်လျှော့ချရန်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းငါ၏အသုံးပြုမှု၏ကြိမ်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ရန်ငါ၏အအားထုတ်မှုအတွက်မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ "နှင့်" ငါ "ညစ်ညမ်းစဉ်းစားလွန်းအချိန်ဖြုန်း" ဒီစကေးထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်များလည်းပါဝင်သည် "Kor et al ။ , 2014) ။ အလားတူပဲ, BPS "မှတစ်ဦး 6-အမှတ် Likert စကေးပေါ်တွင်အတိတ်3လအတွင်းညစ်ညမ်းသူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. ငါးခွအေနမြေားကိုတုံ့ပြန်ရန်တစ်ဦးချင်းစီကမေးတယ်ဘယ်တော့မှ"ရန်"မကြာခဏ"ဒီလိုအဖြစ်ပစ္စည်းများပါဝင်သည်"သင်ကအကြောင်းအပြစ်ရှိကြောင်းခံစားရသော်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းသုံးစွဲဖို့ဆက်လက်"(Kraus et al ။ , 2017) ။ အဆိုပါ BPS ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦးစိစစ်စကေးကြောင်းအစီအမံတစ်ဦးတည်းသာအသှငျအပွငျဖြစ်ပါသည် - ထိန်းချုပ်မှုသို့မဟုတ်အပြုအမူကိုကျော်တို့ကိုကင်းမဲ့ - နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုတစ်ခုသို့မဟုတ် proxy ကိုအတိုင်းအတာအဖြစ်အန္တရာယ်မှာတစ်ဦးချင်းစီဖော်ထုတ်အတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်သည်။ နှိုင်းယှဉ်မှု၌, PPUS ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုလေးရှုထောင့်အကဲဖြတ်ထားပါသည်တစ် multidimensional စကေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးထို့ကြောင့် (ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု symptomology ၏ကျယ်ပြန့်ပုံတစ်ပုံကိုပေးစေခြင်းငှါKor et al ။ , 2014).
Wiers et al အသုံးပြုသော AAT ပုံစံအသစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ (2011) တွင်ပါဝင်သူများသည်ရုပ်ပုံပါအကြောင်းအရာများ၏မသက်ဆိုင်သောဂုဏ်သတ္တိများအပေါ် အခြေခံ၍ ရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်ရန်အတွက်ဂျွိုက်စ်ကိုတွန်းရန်သို့မဟုတ်ဆွဲရန်ညွှန်ကြားထားသည် (ဥပမာ၊ ပုံသည်အလျားလိုက်သို့မဟုတ်ဒေါင်လိုက်ရှိမရှိ) ။ ကွန်ပျူတာတစ်ခုချင်းစီတွင်စံပြဂိမ်းကစားခြင်းအရာနှင့်နားကြပ်များတပ်ဆင်ထားပြီးဆော့ဖ်ဝဲအားလုံးကိုစာရေးသူ RSA မှရေးသားထားသည်။ ကြိုတင်လေ့လာမှုများအရချဉ်းကပ်မှု - ရှောင်ရှားခြင်း joystick သည်သရုပ်ဖော်ပုံများကိုဖော်ပြသည့်သွယ်ဝိုက်ချဉ်းကပ်မှု - ရှောင်ရှားခြင်းအပြုအမူများကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေရန်ခိုင်လုံသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည် (Krieglmeyer & Deutsch၊ ၂၀၁၀) ။ ထို့အပြင် Wiers et al ။ (2009) ချဉ်းကပ်မှုနှင့်ရှောင်ရှားခြင်းလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောခြားနားချက်) သက်ဆိုင်ရာ features တွေနှိုင်းယှဉ်ပါက (ဆီလျှော်ရုပ်ပုံ features တွေကိုတုန့်ပြန်မှာတွေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်သောအခါ, တုံ့ပြန်မှုသတိအသိအမြင်ပြင်ပအလိုအလျောက်ဤသို့စညျးမဉျြးစညျးကမျးဖြစ်ဖို့ပိုများပါတယ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဒီလေ့လာမှုအတွက် AAT တာဝန်အမျိုးသမီး, လိင်ကွဲစုံတွဲနှင့်အမျိုးသမီးစုံတွဲနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဆီမီးတစ်ခုသို့မဟုတ်နာရီအဖြစ်ဘုံအိမ်ထောင်စုပစ္စည်းများ 50 ကြားနေပုံများ, ၏ 50 ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ပုံများပါဝင်သည်။ ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှု Subject အလွန်အမင်းနှိုးဆွသောအဖြစ် rated နှင့်ဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှု (နေဖြင့်သက်သေခိုင်ခံ့စာစားချင်စိတ်ကိုစိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်, ကျလာသောနေကြသည်အမျိုးသမီးသို့မဟုတ်စုံတွဲများသရုပ်ဖော်ထားတဲ့ကြောင့် erotica သတင်းပို့မျိုးစုံလေ့လာမှုများ (အထီး / အမျိုးသမီးနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို / အမျိုးသမီး) နဲ့အညီရွေးချယ်ထားသည့်ခဲ့ကြသည်Bernat, ပက်ထရစ်, Benning, & Tellegen, 2006; Bradley et al ။ , 2001) ။ ရုပ်တုဆင်းတု၏ထက်ဝက် 600 × 800 pixels ကိုခဲ့ကြသည်နှင့် (ဒေါင်လိုက်မြင်ကွင်း) ဒေါင်လိုက်ဆောင် ခဲ့. , အခြားတစ်ဝက် 800 အလျားလိုက် (ရှုခင်းမြင်ကွင်း) 600 pixels ကို×နှင့်တင်ပြခဲ့ကြသည်။
စာဖြင့်အသိပေးအကြောင်းကြားပြီးသောစာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးနောက်သင်တန်းသားများကိုအွန်လိုင်းစစ်တမ်းကောက်ယူရေး ၀ န်ဆောင်မှု Qualtrics မှတစ်ဆင့်ဖြည့်စွက်ရန်မေးခွန်းလွှာများကိုဖြည့်စွက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ AAT ပြီးမြောက်ရန်သင်တန်းသားများကိုညွှန်ကြားခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုကွန်ပျူတာရှေ့တွင်ထိုင်။ ဒေါင်လိုက် (ပုံ - ၆၀၀ × ၈၀၀ ပစ်ဇယ်) ပုံရိပ်များကိုတုန့် ပြန်၍ ဂျွိုက်စ်ကိုဆွဲရန်နှင့်ပုံရိပ်အားအလျားလိုက်အလျားလိုက် (ပုံ - ၈၀၀ × ၆၀၀ ပစ်ဇယ်) ကိုတုံ့ပြန်ရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ ။ Joystick ကိုဆွဲလိုက်ခြင်းဖြင့်ပုံ၏အရွယ်အစားကိုတိုး။ ချဉ်းကပ်မှု၏ခံစားချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အဆိုပါ Joystick တွန်းအားပေးနေတဲ့ရှောင်ရှားမှုလှုပ်ရှားမှုပုံသဏ္theာန်, ရုပ်ပုံအရွယ်အစားလျော့နည်းစေ၏။ ကန ဦး အမှန်တကယ်ပုံအရွယ်အစားမှာ ၃ လက်မ၊ ဒေါင်လိုက်ပုံရိပ်များအတွက် ၄ လက်မ၊ ၄ ခုမှာအလျားလိုက်ပုံရိပ်များဖြစ်သည်။ × ၃ လက်မ။ ချဉ်းကပ်မှုအရရုပ်ပုံသည်မျက်နှာပြင်ကိုဖြည့်ပြီး ၁ စက္ကန့်အတွင်းပျောက်ကွယ်သွားသည်အထိပုံသဏ္continuာန်ဆက်လက်တိုးချဲ့နေသည်။ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းကပုံသည် ၁ စက္ကန့်အတွင်းပျောက်ကွယ်သွားသည်အထိဆက်တိုက်ကျုံ့သွားသည်။ လှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစားနှစ်မျိုး၏ထက်ဝက်ကိုရှုခင်းပုံများနှင့်အခြားတစ်ဝက်ကိုပုံတူရုပ်ပုံများအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုစမ်းသပ်မှုပေါင်း ၁၀၀ ၏ ၂ စီးတွင်တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်တိကျစွာတုန့်ပြန်ရန်တောင်းဆိုခံခဲ့ရသည်။ တုန့်ပြန်မှုအချိန်သည်ပုံရိပ်ကိုဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်တင်ပြချိန် မှစ၍ ဂျွိုက်စ်ကပ်လှုပ်ရှားမှုစတင်သည့်အချိန်မှမီလီစက္ကန့်အရေအတွက်ဖြစ်သည်။ ပထမစီးရီးကိုရောင်စုံစတုဂံများဖြင့်လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှုပေါင်း ၂၀ နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၅၀ နှင့်အပြန်အလှန်လှုံ့ဆော်မှု ၅၀ နှင့် Pseudorandom order ဖြင့်တင်ပြခဲ့သည်။ ဒုတိယစီးရီးသည် 600-s break ပြီးနောက်ဖြစ်ပွားပြီးလက်တွေ့စမ်းသပ်မှု ၂ ခုဖြင့်စတင်ခဲ့ပြီးစမ်းသပ်မှုပေါင်း ၁၀၀ ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နားကြပ်များ၌ဆူညံသံဆူညံသံများကမှားယွင်းသောအဖြေများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုစီသည် ၅ မိနစ်ခန့်ကြာသည်။ AAT ပြီးဆုံးသွားပြီးနောက်သင်တန်းသားများကိုအကျဉ်းချုံး။ ထုတ်ပယ်ခဲ့သည်။
သိမှုဘက်လိုက်မှုအချက်အလက်များကို Wiers et al တွေ့ရှိသည့်နည်းအတိုင်းတွက်ချက်သည်။ (2011) ကို AAT အဘို့, မမှန်ကန်ကြောင်း / လွဲချော်ခဲ့ကြသည်တုံ့ပြန်မှုကြောင့်သုံးယောက်ထက်တုံ့ပြန်မှုကြိမ်ရှည် SDယုတ်အထက်တွင့်တစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သူရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အခြေခံပြီးစွန့်ပစ်ခဲ့ကြသည်။ ခေါ်ဆောင်သွားချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုရမှတ်ပျမ်းမျှတုံ့ပြန်မှုကြိမ်နုတ်အားဖြင့်တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်:
[(ခေါ်ဆောင်သွားတွန်းအားပေး - ခေါ်ဆောင်သွားဆွဲ) - (ကြားနေတွန်းအားပေး - ကြားနေဆွဲ)].
ထို့ကြောင့်တစ်ဦးအပြုသဘောတန်ဖိုးကိုခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်သိမြင်ဘက်လိုက်မှုညွှန်ပြ။ ယင်းချဉ်းကပ်မှု-ရှောင်ရှားခြင်း Joystick တာဝန်တစ်ခုမှာအလားအလာဝေဖန်မှုများ (ကဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်မှအထိခိုက်မခံစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်Krieglmeyer & Deutsch၊ ၂၀၁၀); သူတို့နည်းလမ်းများထက်ဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်မှလျော့နည်းထိခိုက်မခံတဲ့ကြောင့်အညီ, ပျမ်းမျှတုံ့ပြန်မှုကြိမ် (အသုံးပြုခဲ့ကြသည်Rinck & Becker က, 2007; Wiers et al ။ , 2009).
စာဖြင့်ရေးသားအသိပေးသဘောတူညီခကျြပေးပွီးနောကျ, လေ့လာမှု Connecticut တက္ကသိုလ်မှာ Institutional ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
သင်တန်းသား ၇၂ ယောက်ကစမ်းသပ်မှုပြီးဆုံးသွားတယ်။ Kinsey စကေး (လိင်မှုဆိုင်ရာကြိုက်နှစ်သက်မှုမဟုတ်သော) လိင်ဆက်ဆံမှုကို ဦး စားပေးသောကြောင့်ပါဝင်သူရှစ် ဦး ကိုဖယ်ထုတ်ခဲ့သည်။Kinsey et al ။ , 1948/1988) နှင့်မပြည့်စုံသော (သို့) အစွန်းရောက်သောအချက်အလက်များ (ဆိုလိုသည်မှာသုံး ဦး ထက်ပိုသော) ကြောင့်နောက်ထပ်ပါဝင်သူခြောက် ဦး ကိုဖယ်ထုတ်ခဲ့သည် SDယုတ်အထက်တွင့်) ။ ဤသည် 58 ပြည့်စုံဒေတာအစုံခဲ့သည်။
တစ်ဦးကတစ်ဦး-နမူနာ t- စမ်းသပ်မှုကသိသိသာသာချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုရှိခြင်းကို 81.81 ms (SD = 93.07) ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တွေအတွက်, t(57) = 6.69, p <.001, ကြားနေပုံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ (ပုံ 1) ။ ထို့အပြင်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုရမှတ်များအကြားဆက်စပ်မှုကိုဆန်းစစ်အပေါ်ကျနော်တို့ BPS နှင့်ချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုရမှတ်များအကြားသိသိသာသာဆက်စပ်တွေ့ r = .26, p <.05, BPS ပိုမိုအမှတ်ရလေလေချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုပိုမိုအားကောင်းလေလေဖြစ်သည် 2) ။ အဆိုပါ PPUS နှင့်ချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုရမှတ်များအကြားဆက်စပ်မှု, သိသိသာသာမဟုတ်ခဲ့ r = .19, NS ။ BPS နှင့် PPUS ရမှတ်များအကြားခိုင်မာသောဆက်စပ်မှုရှိခဲ့သည် r = .77, p <.001
ပုံ 1 ။ (အဲဒီမှာကြားနေလှုံ့ဆော်မှုမချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှု, ဒါပေမဲ့သိသိသာသာp <.001) ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ဘက်လိုက်မှုချဉ်းကပ်။ ချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုရမှတ်များကိုပျမ်းမျှတုံ့ပြန်မှုအကြိမ်နုတ်ခြင်းဖြင့်တွက်ချက်သည်။ (RTတွန်းထိုး - RTဆွဲပါ)
ပုံ2။ အဆိုပါ BPS နှင့်ချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုအပေါ်ရမှတ်များအကြားသိသိသာသာအပြုသဘောဆက်စပ်မှု (ရှိခဲ့သည်r = .26, p <.05)၊ BPS ပိုမိုမြင့်မားသည်နှင့်အမျှချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုပိုမိုပြင်းထန်ကြောင်းညွှန်ပြသည်
စာရေးသူ AK မှအကြံပြုထားသည့်အတိုင်းပြpornနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကိုအန္တရာယ်ရှိသောသူများ၏သိမြင်မှုဘက်လိုက်မှုများကိုစစ်ဆေးရန် PPUS တွင်စုစုပေါင်းရမှတ် ၂၈ (သို့) ထိုထက်ပိုသောပြproblemနာကိုအပြာအပြာစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအတွက်တံခါးခုံအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နမူနာတွင်ပါ ၀ င်သူလေး ဦး ကိုဤသတ်မှတ်ချက်အရပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုသူများအဖြစ်ခွဲခြားထားသည်။ ကျနော်တို့ကသိမှုဘက်လိုက်မှုရမှတ်များအုပ်စုနှစ်ခုအကြားသိသိသာသာကွဲပြားလျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်ကှဲလှဲ (ANOVA) ၏တစ်လမ်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကောက်ယူ။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသူများမှသိသိသာသာပိုမိုပြင်းထန်သောချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုရလဒ်ကိုပြသခဲ့သည် [28 ms (SD = 135.96), n ပြ4နာကိုညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းမရှိဘဲတစ် ဦး ချင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း [74.04 msSD = 85.91), n = 54]၊ F(1, 56) = 5.91, p <.05 (စားပွဲတင် 1) ။ သောကြောင့်အုပ်စုသည်အရွယ်အစားအတွက်ခြားနားချက်၏, ထိုအဖွဲ့များအကြားကှဲလှဲ၏တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချို့စိုးရိမ်ပူပန်မှုလည်းမရှိ။ ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ကှဲလှဲ၏တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းတစ် Levene ရဲ့စမ်းသပ်မှုအထဲသို့ပြေး ဝင်. နှင့်အုပ်စုများအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ရှိကွောငျးတှေ့ရှိဤအရပ်ပု ANOVA ဤကိစ္စတွင်အတွက်သက်ဆိုင်ကြောင်းအကြံပြု (Levene ရဲ့စာရင်းဇယား = 1.79 df1 = 1, df2 = 56, p = .19) ။
စားပွဲတင် 1 ။ နမူနာအတွက်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအတွက်လေးပါးအခြေအနေများများအတွက်ပျမ်းမျှ BPS နှင့် PPUS ရမှတ်များနှင့် RTs (N = 4), PPUS အပေါ် 28 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသွင်းယူကြောင်းတစ် ဦး ချင်းစီအဖြစ်သတ်မှတ်
ကြားနေချဉ်းကပ် RT ကို (ms)
ကြားနေရှောင်ပါ RT ကို (ms)
ခေါ်ဆောင်သွားချဉ်းကပ် RT ကို (ms)
ခေါ်ဆောင်သွားရှောင်ပါ RT ကို (ms)
မှတ်စု။ BPS: အကျဉ်းချုပ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ Screener; PPUS: ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုစကေး; RT ကို: တုံ့ပြန်မှုအချိန်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုသောလိင်ကွဲလိင်ကွဲအမျိုးသားကျောင်းသူကျောင်းသားများသည် AAT လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုများကိုရှောင်ရှားရန်ထက်ချဉ်းကပ်ရန်ပိုမိုမြန်ဆန်ကြောင်းအဖြေများကထောက်ခံသည်။ erotic လှုံ့ဆော်မှုများအတွက် 81.81 ms ၏သိသာချဉ်းကပ်ဘက်လိုက်မှုရှိ၏ ဆိုလိုသည်မှာသင်တန်းသားများသည်ခေါ်ဆောင်သွားသောရုပ်ပုံများမှရွေ့လျားခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုလျင်မြန်သောရုပ်ပုံများဆီသို့ပိုမိုလျင်မြန်စွာရွေ့လျားလာကြသည်။ ပါဝင်သူများသည်ခေါ်ဆောင်သွားသောလှုံ့ဆော်မှုများကိုတုန့်ပြန်ရန်ထက်၎င်းကိုတွန်းရန်ထက် Joystick ကိုဆွဲရန်ပိုမြန်သော်လည်းဤဘက်လိုက်မှုသည်ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မရှိခဲ့ပါ။ အလားတူချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုထိုကဲ့သို့သော Stark et al ကဲ့သို့သောပြုပြင်ထားသော AATs ကိုအသုံးပြု။ လေ့လာမှုများအစီရင်ခံခဲ့သည်။ (2017) တစ် ဦး ခေါ်ဆောင်သွား -AAT နှင့် Wiers et al သုံးပြီး။ (2011) တစ်ဦးအရက်-AAT ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်အများအပြား src တာဝန်များကိုစွဲတစ်ဦးချင်းစီစွဲလမ်းလှုံ့ဆော်မှု (ချဉ်းကပ်ထက်ရှောင်ရှားရန်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုသဘောထားကိုပြသကြောင်းအကြံပြုနှင့်အညီလည်းရှိပါတယ်Bradley et al ။ , 2004; Field et al ။ , 2006, 2008).
ယေဘုယျတွေ့ရှိချက်စွဲလမ်းလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ချဉ်းကပ်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေအခြားသိမြင်ဘက်လိုက်မှု၏ဆက်စပ်မှုတွေများကရှင်းပြခဲ့စေခြင်းငှါအရာ, ရှောင်ရှားခြင်းထက် ပို. လျင်မြန်သို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ထားတုံ့ပြန်မှုဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ စာပေအားဖြင့်အကြံပြုအဖြစ် (Cousijn et al ။ , 2011; Field & Cox, 2008; Stacy & Wiers, 2010), စွဲ -related တွေကိုအဘို့အလိုအလျှောက်ချဉ်းကပ်မှုသဘောထားတွေကိုပြသသူတစ် ဦး ချင်းစီလည်းသူတို့ကိုကြာကြာကြည့်လေ့ (အမှန်စင်စစ်, သင်တန်းသားများကိုသူတို့ကိုပယ်ရှားတွန်းရှေ့တော်၌, ကြားနေရုပ်ပုံများကိုထက် 100 ms ကျော်ပို။ erotic ပုံရိပ်တွေကိုကြည့်; စားပွဲတင်) 2) နှင့်ထိုကဲ့သို့သောကြားနေလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်အခြားတွေကို, ထက်ပိုမိုအပြုသဘောဆောင်ခြင်းနှင့်နှိုးဆွအဖြစ်သူတို့ကိုအကဲဖြတ်ရန်။ ထို့ကြောင့် Mechelmans et al အစီရင်ခံတင်ပြ။ (2014) compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့အတူတစ်ဦးချင်းစီခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုပြသသောဖော်ပြသည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ချဉ်းကပ်မှု, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အကဲဖြတ်ဘက်လိုက်မှု၏, နှစ်ဦးစလုံးကိုသီးခြားစီနှင့်အတူတူ, အခန်းကဏ္ဍစူးစမ်းလေ့လာသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုအဘို့ဤချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုသေချာပေါက်စွဲအန္တရာယ်များ၏ညွှန်ပြမပေးကြောင်းသတိပြုရကျိုးနပ်သည်, ဒါကြောင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုဆီသို့အထွေထွေအပြုသဘောရှိသည်သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာကြားနေလှုံ့ဆော်မှုကျော်ပါကပိုနှစ်သက်ကြောင်းယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်။ အမှန်စင်စစ်ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုထိုကဲ့သို့သောဆီမီးသို့မဟုတ်စားပွဲခုံအဖြစ်ဘုံအိမ်ထောင်စုပစ္စည်းများ, ထက် သာ. ကြီးမြတ်စိတ်ခံစားမှု valence ရှိသည်။ ထို့အပွငျခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုမူလကပင် (ကအားကောင်းတဲ့အစာစားချင်စိတ်စိတ်ပိုင်းပြည်နယ်ကျလာသောBradley et al ။ , 2001), တစ်ဦးချင်းစီမသက်ဆိုင်စွဲအန္တရာယ်များ၏ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုချဉ်းကပ်ရန်နာမယူဘဲနေစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း။
စားပွဲတင်2။ တစ်ခုလုံးကိုနမူနာထဲတွင်လေးခွအေနမြေားအတှကျပျမ်းမျှ BPS နှင့် PPUS ရမှတ်များနှင့် RTs (N = ၂၀58)
ထို့အပြင် BPS အပေါ်စုစုပေါင်းရမှတ်အပြုသဘောခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ချဉ်းကပ်၏ဒီဂရီပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ပြင်းထန်မှု သာ. သည်ပိုမိုအားကောင်းကြောင်းညွှန်ပြ, ချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုရမှတ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်။ ဤသည်အသင်းအဖွဲ့နောက်ထပ်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီသည် PPUS အားဖြင့်ခွဲခြားအဖြစ်, ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမရှိဘဲတစ်ဦးချင်းစီနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုပိုထက် 200% ပိုမိုအားကောင်းချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုပြသကြောင်းအကြံပြုရလဒ်များကိုကထောက်ခံခဲ့သည်။ သို့သော်ဤနောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများအတွက်စံတွေ့ဆုံငယ်အရေအတွက်ကိုပေးထားသောအထူးသတိထားပြီးစဉ်းစားရပါမည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်စွဲ-related လှုံ့ဆော်မှုသည်ချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုကိုညွှန်းစှဲ၏လေ့လာမှုများအတွက်သူတို့နှင့်အတူ resonate (စှဲနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဘုံအင်္ဂါရပ်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါသည်Bradley et al ။ , 2004; Cousijn, et al ။ , 2011; Field et al ။ , 2006; Krieglmeyer & Deutsch၊ ၂၀၁၀; Wiers et al ။ , 2011) ။ စွဲ-related တွေကိုများအတွက်ဦးစားပေးအာရုံစိုက်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့ (စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းသုတေသနနှင့်အညီField & Cox, 2008; Schoenmaker et al ။ , 2007), ကျနော်တို့ချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုရမှတ်အပြုသဘောပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပြင်းထန်မှုထင်ဟပ်နေတဲ့တိုင်းတာမှုအဖြစ်အသုံးပြုစေခြင်းငှါအရာ BPS အပေါ်ရမှတ်များ, နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကို (ဂျာမဏီကနေကျောင်းသားများနှင့် Non-ကျောင်းသားနမူနာထဲမှာဘာစွဲလက္ခဏာတွေနဲ့ချဉ်းကပ်-ရှောင်ရှားလိုတဲ့သဘောထားကိုအကြားတစ်ဦး curvilinear ကြားဆက်ဆံရေးယင်းသည်သူတို့အားကှာခွားSnagowski & အမှတ်တံဆိပ်, 2015) ။ Stark et al ၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်ဆင်တူသည်။ (2017), ဒီလေ့လာမှုမှာ သာ. ကြီးမြတ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပြဿနာများနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီဘက်လိုက်မှု avoidance မဟုတ်, ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုအဘို့ကိုသာချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုပြသခဲ့သည်။ ဒီဆနျ့ကငျြဘအဘို့တစ်ခုမှာဖြစ်နိုင်သောရှင်းပြချက် Snagowski နှင့်အမှတ်တံဆိပ် (ခြင်းဖြစ်သည်2015ဤသည်လေ့လာမှုနှင့် Stark et al လေ့လာမှု၏သော်လည်း, တာဝန် - သက်ဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက် (ဆိုလိုသည်မှာရုပ်ပုံအကြောင်းအရာနှင့်အညီ joystick ရွှေ့) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ (2017) အလုပ်နှင့်မသက်ဆိုင်သောညွှန်ကြားချက်များ (ဥပမာ - ရုပ်ပုံ၏အရောင်နှင့်သို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံဘောင်များ၏အရောင်အရရွှေ့သည်) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ တာဝန်နှင့်သက်ဆိုင်သောညွှန်ကြားချက်များကသင်တန်းသားများကိုလှုံ့ဆော်မှုများကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာလုပ်ဆောင်ရန်ဖိအားပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အပြစ်ရှိသည်ဟုခံစားရသူများသို့မဟုတ်သူတို့၏အပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်သောဆိုးကျိုးများကိုကြောက်ရွံ့သောအသုံးပြုသူများအကြားအပြုအမူကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။Stark et al ။ , 2017) ။ လုပ်ငန်းနှင့်မသက်ဆိုင်သောညွှန်ကြားချက်များသည်တူညီသောပြုပြင်ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်ကိုအာမခံနိုင်မည်မဟုတ်သော်လည်း Wiers et al ။ (2009) ဆီလျှော်ရုပ်ပုံ features တွေကိုတုန့်ပြန်မှာတွေ့ရှိချဉ်းကပ်လှုပ်ရှားမှုတွေအော်တိုနဲ့သတိလစ်ဖြစ်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းတွင်ဖော်ပြသည်။ ပေါင်းလဒ်များတွင်ကွဲပြားခြားနားသောတရားစီရင်မှုအတွက်ဖျော်ဖြေလေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးသိသာကွဲပြားမှု, ကွဲပြားခြားနားသောနမူနာ (ကျောင်းသား / Non-ကျောင်းသား vs. ကျောင်းသား) နှင့်တိကျသောနည်းစနစ်ပေးသောနောက်ထပ်သုတေသန AAT ၏ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းကို အသုံးပြု. ကွဲပြားခြားနားသောလူဦးရေအတွက်ချဉ်းကပ်မှုနှင့်ရှောင်ရှားခြင်းအပြုအမူတွေကိုနားလည်ရန်လိုအပ် ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အထီးကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားဘာစွဲပျံ့နှံ့၏ 4% သတင်းပို့ 58 ဘာသာရပ်များ၏ 6.89 (28%) ကို PPUS သုံးပြီး 10 အချက်များကိုတစ်ခုံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး, ဤတွေ့ရှိချက်သည်ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အညီဖြစ်ပါသည်Giordano & Cashwell, 2017).
အတူတူယူရလဒ်ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်း (အကြားမျဉ်းပြိုင်အကြံပြုGrant et al ။ , 2010) ။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကို (အထူးသဖြင့်ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်း) (အရက်သုံးမမှန်အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိကြောင်းတစ်ခုချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုဆင်တူ, ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုထက်ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုဖို့ပိုမြန်ချဉ်းကပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်Field et al ။ , 2008; Wiers et al ။ , 2011), ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း (Cousijn et al ။ , 2011; Field et al ။ , 2006), နှင့်ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲပုံမမှန် (Bradley et al ။ , 2004) ။ သိမြင်မှုအင်္ဂါရပ်များနှင့်နှစ်ဦးစလုံးပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းနှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုပါဝင်ပတ်သက် neurobiological ယန္တရားများအကြားတစ်ဦးထပ်တူ (ကြိုတင်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းသောဖွယ်ရှိပုံရသည်Kowalewska et al ။ , 2018; Stark et al ။ , 2018) ။ ၏လေ့လာမှုများရှိပါသည်အဖြစ်မည်သို့ပင်ဆိုစေ, အပိုဆောင်းလေ့လာမှုများ, အထူးသဖြင့် (အမျိုးသမီးများ, Non-လိင်ကွဲတစ်ဦးချင်းစီနှင့်ကောလိပ်ကျောင်း-အသက်ပြင်ပမျိုးစုံအသက်အရွယ်အဖွဲ့များအပါအဝင်လက်တွေ့နှင့် Non-လက်တွေ့လူဦးရေနှစ်ဦးစလုံးအတွက်) အခြားညစ်ညမ်း-သုံးပြီးအုပ်စုများအတွက်သိမြင်မှုဘက်လိုက်မှု၏မျက်ခြေမပြတ်နေကြတယ် neurobiological နှင့်လက်တွေ့ Correlate ။
ကန့်သတ်ချက်များကိုသတိပြုသင့်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ဤလေ့လာမှုသည်လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများမှသာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုသူများထံမှအချက်အလက်များကိုလေ့လာခဲ့သည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများသည်အခြားလိင်ဆိုင်ရာ ဦး တည်ချက် (ဥပမာ - လိင်တူဆက်ဆံခြင်းနှင့်ရိုးရိုးလိင်)၊ အမျိုးမျိုးသောလိင်မှုဆိုင်ရာအမြော်အမြင်ရှိအမျိုးသမီးများ၊ လိင်နှင့်အခြားအုပ်စုများ (ဥပမာ - kink နှင့် polyamorous) တွင်သိမြင်နိုင်သောဘက်လိုက်မှုများကိုစစ်ဆေးသင့်သည်။ သိမြင်မှုဘက်လိုက်မှုများကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သည့်အခြားအကြောင်းအချက်များ (ဥပမာ - ပုံမှန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းပမာဏကဲ့သို့သောပမာဏ) စသည်တို့ကိုစုဆောင်းခြင်းမပြုရသေးသောအနာဂတ်လေ့လာမှုများတွင်လေ့လာသင့်သည်။ အပိုဆောင်းလေ့လာမှုများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲတည်ရှိနိုင်သည့်သိမြင်မှုဘက်လိုက်မှု (ဥပမာ - အပြာစာပေရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုမကြည့်ရှုသောအုပ်စုတစ်စုတွင်) ကိုလည်းစစ်ဆေးသင့်သည်။
ထို့အပြင်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများသည်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းတုန့်ပြန်မှုအပေါ်လွှမ်းမိုးမှုရှိနိုင်သည်။ သို့သော်ပြalesနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ်အကဲဖြတ်ခြင်းအပေါ်ရမှတ်များအကြားအသင်းအဖွဲ့များသည်ချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုပြproblemsနာများအကြားဆက်နွယ်မှုရှိသည်၊ ဤစိုးရိမ်မှုများကိုလျှော့ချရန်နှင့်အနာဂတ်လေ့လာမှုများတွင်သိမြင်မှုဘက်လိုက်မှုများကိုထပ်မံစစ်ဆေးသင့်ကြောင်းအကြံပြုသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြapproachနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ပိုမိုနမူနာလိုအပ်သည်။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းတွင်ချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုများကိုစစ်ဆေးသည့်လေ့လာမှုတစ်ခုသည်သိပ္ပံဆိုင်ရာဘက်လိုက်မှု၏အခန်းကဏ္itsကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည် (ဥပမာကုသမှုနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလ) ။ ထပ်ဆောင်းလေ့လာမှုများသည်သိမြင်မှုဘက်လိုက်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ ကုသမှုများကိုလည်းစုံစမ်းနိုင်သည်။ဂူ et al ။ , 2015; Wiers et al ။ , 2011) ။ ဥပမာအားဖြင့်, အရက်သုံးပြဿနာများနှင့်အတူအတွင်းလူနာအရက်လှုံ့ဆော်မှုကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းထက်တစ် Joystick ပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးပါကချဉ်းကပ်ဖို့လုံးလုံးလြားလြားသို့မဟုတ်အတိအလင်းလေ့ကျင့်ခဲ့ကြသည်။ အရက်ကိုချဉ်းကပ်ဖို့အရေးယူမှုသဘောထားကို၏ဤခြယ်လှယ်အရက်များအတွက်အသစ်တစ်ခုကိုရှောင်ရှားဘက်လိုက်မှုအတွက်ရလဒ်နှင့်အရက်သုံးစွဲမှုလျော့ကျ; ထိုမှတပါး, ပိုကောင်းတဲ့ကုသမှုရလဒ်ကို (1 တစ်နှစ်အကြာတွင်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်Wiers et al ။ , 2011) ။ အလားအလာ, သိမြင်မှုပြန်လေ့လာခြင်းအစီအစဉ်များပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကုသမှုအတွက်အရေးပါသောလက်တွေ့သက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့, ဤဖြစ်နိုင်ခြေအနာဂတ်လေ့လာမှုများတွင်တိုက်ရိုက်စမ်းသပ်ပြီးရပါမည်။
စာရေးဆရာ '' contributio
RSA နှင့်ဒေါက်တာ MNP လေ့လာမှုဒီဇိုင်းကိုစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ RSA task ကိုပရိုဂရမ်။ MG ကိုဆှေးနှေးနှင့်ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုမှသက်ဆိုင်ရာပုံရိပ်ဖြစ်သည်။ SWK နှင့် AK ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်လေ့လာမှုမှာအလုပ်ဟာညစ်ညမ်းအကဲဖြတ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေး။ အက်စ်အက်စ်ထောက်ခံမှုရရှိသောနှင့်အချက်အလက်အစုအဝေးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ RSA နှင့် တွဲဖက်. အက်စ်အက်စ်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ကနဦးမူကြမ်း generated ။ အားလုံးစာရေးဆရာများဖတ် input ကိုထောက်ပံ့နှင့်ကြိုတင်တင်ပြနိုင်ရန်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ပြန်လည်သုံးသပ်။
အဆိုပါစာရေးဆရာကဒီလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်များ၏ content မှလေးစားမှုနှင့်အတူအကျိုးစီးပွားမျှပဋိပက္ခများကိုရှိသည်။ ဒေါက်တာ MNP အောက်ပါဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအကူအညီအထောက်အပံ့များသို့မဟုတ်လျော်ကြေးလက်ခံရရှိခဲ့သည်: သူအဘို့တိုင်ပင်ခြင်းနှင့် RiverMend ကျန်းမာရေး, Opiant / Lakelight ဟော်မုန်းများနှင့်ဂျက်ဇ်ဂီတဆေးဝါးအကြံပေးတော်မူပြီ Mohegan Sun ကကာစီနိုကနေတားမြစ်ခြင်းမရှိသောသုတေသနထောက်ခံမှုရရှိခဲ့နှင့်တာဝန်ရှိဂိမ်း, Pfizer ဆေးဝါးများအတွက်အမျိုးသားစင်တာမှ (ယေးလ်မှ) ထောက်ခံမှုပေးရန်ပြီ မူးယစ်ဆေးစွဲ, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်, ဒါမှမဟုတ်အခြားကျန်းမာရေးအကြောင်းအရာများနှင့်ဆက်စပ်သောစစ်တမ်းများ, Mail, သို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းညှိနှိုင်းပါဝင်ခဲ့ပြီ dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါးများမှလေးစားမှုနှင့်အတူအပါအဝင်မမှန်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းမှုကိုထိန်းချုပ် impulse နှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စရပ်များအပေါ်ဥပဒေနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းအဖွဲ့အစည်းများအဘို့တိုင်ပင်တော်မူပြီ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်စွဲန်ဆောင်မှုများပြဿနာလောင်းကစားန်ဆောင်မှုများအစီအစဉ်၏ Connecticut ဦးစီးဌာနများတွင်လက်တွေ့စောင့်ရှောက်မှုပေးတော်မူပြီ အမျိုးသားကျန်းမာရေး၏ Institutes နှင့်အခြားအေဂျင်စီများများအတွက်ထောက်ပံ့ကြေးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖျော်ဖြေမူပြီ ဂျာနယ်များနှင့်ဂျာနယ်ကဏ္ဍများကိုတည်းဖြတ်တော်မူပြီ ခမ်းနားကျည်, CME ဖြစ်ရပ်များနှင့်အခြားလက်တွေ့သို့မဟုတ်သိပ္ပံနည်းကျနေရာများအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာပို့ချချက်အားပေးတော်မူပြီ; နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကျမ်း၏ကြေညာသူအဘို့စာအုပ်တွေသို့မဟုတ်စာအုပ်အခန်းကြီးထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်။
Bernat, E., ပက်ထရစ်, C. ဂျေ, Benning, အက်စ် D., & Tellegen, A. (2006). အကျိုးသက်ရောက်စေဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှုအပေါ်ရုပ်ပုံအကြောင်းအရာနှင့်ပြင်းထန်မှု၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychophysiology, 43 (1), 93-103။ Doi:https://doi.org/10.1111/j.1469-8986.2006.00380.x Crossref, Medline, Google Scholar
Bradley, ခပီ, ဖျော်ဖြေမှု, M., Mogg, K., & de Houwer, J. (2004). နီကိုတင်းမှီခိုအတွက်ဆေးလိပ်သောက်တွေကိုအဘို့အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အကဲဖြတ်ဘက်လိုက်မှု: အမြင်အာရုံ Oriental အတွက်ဘက်လိုက်မှု၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်စဉ်များ။ အမူအကျင့်ဆေးဝါးဗေဒ, 15 (1), 29-36။ Doi:https://doi.org/10.1097/00008877-200402000-00004 Crossref, Medline, Google Scholar
Bradley, အမ်အမ်, Codispoti, M., Cuthbert, ခ N., & lang, ပီဂျေ (2001). စိတ်ခံစားမှုများနှင့်လှုံ့ဆော်မှုငါ: ရုပ်ပုံအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ကာကွယ်ရေးနှင့်အစာစားချင်စိတ်တုံ့ပြန်မှု။ Emotion, 1 (3), 276-298။ Doi:https://doi.org/10.1037/1528-3542.1.3.276 Crossref, Medline, Google Scholar
Braithwaite, အက်စ် R., Coulson, G., Keddington, K., & Fincham, အက်ဖ် D. (2015). အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များအပေါ်ညစ်ညမ်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်ကောလိပ်ကျောင်းအတွက်ထွန်းသစ်စလူကြီးများအကြားတွင်တက် hooking။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, 44 (1) ၏မော်ကွန်း, 111-123။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10508-014-0351-x Crossref, Medline, Google Scholar
ဘရောင်း, C. C., Durtschi, ဂျေအေ, ကာရိုး, ဂျေအက်စ်, & Willoughby, ခဂျေ (2017). ညစ်ညမ်းကိုအသုံးပြုဖို့သူအကောလိပ်ကျောင်းသားများအတန်းကိုနားလည်ခြင်းနှင့်ခန့်မှန်း။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာ, 66, 114-121။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.09.008 Crossref, Google Scholar
ကုန်သည်များ, R. အေ, တေလာ, ဂျေ။, & Potenza, အမ် N. (2003). မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လှုံ့ဆော်မှုများဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ neurocircuitry: စွဲအားနည်းချက်တစ်ခုအရေးပါကာလ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်, 160 (6), 1041-1052။ Doi:https://doi.org/10.1176/appi.ajp.160.6.1041 Crossref, Medline, Google Scholar
Cooper က, A., Delmonico, D. L., & Burg, R. (2000). ဘာသုံးစွဲသူများချိုးဖောက်မှုများ, နှင့် compulsive: နယူးတွေ့ရှိချက်များနှင့်ဂယက်ရိုက်။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်မသန်စွမ်းခြင်း (၇) (၁-၂)၊ 5-29။ Doi:https://doi.org/10.1080/10720160008400205 Crossref, Google Scholar
Cousijn, J., Goudriaan, အေအီး, & Wiers, R. ဒဗလျူ (2011). ဆေးခြောက်ကိုဦးတည်ထွက်ရောက်ရှိ: မိုးသည်းထန်စွာဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများသည်အတွက်ချဉ်းကပ်-ဘက်လိုက်မှုဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုခန့်မှန်း။ စွဲ, 106 (9), 1667-1674။ Doi:https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2011.03475.x Crossref, Medline, Google Scholar
ဖျော်ဖြေမှု, M., & ကော့, ဒဗလျူအမ် (2008). စွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုမြား: A ယင်း၏ဖွံ့ဖြိုးရေးသုံးသပ်ချက်ကို, အကြောင်းတရားများနှင့်အကျိုးဆက်များ။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မှီခို, 97 (1-2), 1-20။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2008.03.030 Crossref, Medline, Google Scholar
ဖျော်ဖြေမှု, M., Eastwood, B., Mogg, K., & Bradley, ခပီ (2006). ပုံမှန်ဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများသည်အတွက်ဆေးခြောက်တွေကိုရွေးချယ်အပြောင်းအလဲနဲ့။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မှီခို, 85 (1), 75-82။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2006.03.018 Crossref, Medline, Google Scholar
ဖျော်ဖြေမှု, M., Kiernan, A., Eastwood, B., & ကလေးသူငယ်, R. (2008). မိုးသည်းထန်စွာသောက်များတွင်အရက်သေစာတွေကိုမှလျင်မြန်စွာချဉ်းကပ်တုံ့ပြန်မှု။ အပြုအမူကုထုံးနှင့်စမ်းသပ်စိတ်ရောဂါကုသမှု, 39 (3) ၏ဂျာနယ်, 209-218။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2007.06.001 Crossref, Medline, Google Scholar
Giordano, အေအယ်လ်, & Cashwell, C. S. (2017). ကောလိပ်ကျောင်းသားတို့တွင်အကျဘာစွဲ: တစ်ဦးကပျံ့နှံ့လေ့လာမှု။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်မသန်စွမ်းခြင်း (၇) (၁-၂)၊ 47-57။ Doi:https://doi.org/10.1080/10720162.2017.1287612 Crossref, Google Scholar
Gola, M., & Draps, M. (2018). အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက် Ventral striatal reactivity ကို။ စိတ်ရောဂါကုသမှု,9အတွက်နယ်စပ်ဒေသ 1-9။ Doi:https://doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00546 Crossref, Medline, Google Scholar
Gola, M., Wordecha, M., Sescousse, G., Lew-Starowicz, M., Kossowski, B., Wypych, M., Potenza, အမ် N., & Marchewka, A. (2017). ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းဖြစ်နိုင်သလား? ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ကုသမှုရှာကြံယောက်ျားတစ်ဦး fMRI လေ့လာမှု။ Neuropsychopharmacology, 42 (10), 2021-2031။ Doi:https://doi.org/10.1038/npp.2017.78 Crossref, Medline, Google Scholar
Grant က, ဂျေအီး, ဘရူ, ဂျေအေ, & Potenza, အမ် N. (2007). ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်း၏ neurobiology။ CNS Spectrum, 11 (12), 924-930။ Doi:https://doi.org/10.1017/S109285290001511X Crossref, Google Scholar
Grant က, ဂျေအီး, Potenza, အမ် N., Weinstein, နံနက်။, & Gorelick, A. (2010). အမူအကျင့်စှဲဖို့နိဒါန်း။ အမေရိကန်မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်အလွဲသုံးမှု၏ဂျာနယ်, 36 (5), 233-241။ Doi:https://doi.org/10.3109/00952990.2010.491884 Crossref, Medline, Google Scholar
Gu, X., Lohrenz, T., sala, R., Baldwin, P. R., Soltani, A., Kirk က, U., Cinciripini, P. အမ်, & မွန်တဂူ, P. R. (2015). နီကိုတင်းနှင့် ပတ်သက်. ယုံကြည်ချက်ရွေးချယ်ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်တန်ဖိုးနှင့်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားအချက်ပြမှုများ modulates။ အမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ, 112 (8) ၏ဆောင်ရွက်ချက်များ, 2539-2544။ Doi:https://doi.org/10.1073/pnas.1416639112 Crossref, Medline, Google Scholar
Kinsey, A., Pomeroy, ဒဗလျူခ, & မာတင်, စီအီး (1948 / 1988) ။ လူ့အထီးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ Philadelphia တွင်, PA / Bloomington, IN: WB Saunders / Indiana ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်စာနယ်ဇင်း. Google Scholar
Kor, A., Zilcha-Mano မှ, S., Fogel, Y., Mikulincer, M., ရိဒ်, R., & Potenza, M. (2014). အဆိုပါပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုစကေး၏ Psychometric ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ, 39 (5), 861-868။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2014.01.027 Crossref, Medline, Google Scholar
Kowalewska, E., Grubbs, ဂျေခ, Potenza, အမ် N., Gola, M., Draps, M., & Kraus, အက်စ်ဒဗလျူ (2018). အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါအတွက် Neurocognitive ယန္တရားများ။ လက်ရှိလိင်ကျန်းမာရေးအစီရင်ခံစာများ, 10 (4), 255-264။ Doi:https://doi.org/10.1007/s11930-018-0176-z Crossref, Google Scholar
Kraus, အက်စ်ဒဗလျူ, Gola, M., Kowalewska, E., Lew-Starowicz, M., Hoff, R. အေ, ပေါ်တာ E., & Potenza, အမ် N. (2017). အကျဉ်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ Screener: တစ်ဦးကအမေရိကန်များ၏နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်ပိုလန်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်,6(S1), 27-28. Google Scholar
Kraus, အက်စ်ဒဗလျူ, Krueger, R. ခ, Briken, P., ပထမဦးစွာ အမ်ခ, Stein, J. ဂျေ, Kaplan, ဒေါ်။, Voon, V., Abdo, C. H., Grant က, ဂျေအီး, Atalla, E., & ရိဒ်, G. အမ် (2018). အဆိုပါ ICD-11 အတွက် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ။ ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု, 17 (1), 109-110။ Doi:https://doi.org/10.1002/wps.20499 Crossref, Medline, Google Scholar
Krieglmeyer, R., & Deutsch, R. (2010). ချဉ်းကပ်နည်း-ရှောင်ရှားခြင်းအပြုအမူများ၏အစီအမံနှိုင်းယှဉ်: အဆိုပါ manikin တာဝန် vs. အဆိုပါ Joystick တာဝန်နှစ်ခုဗားရှင်း။ သိမှတ်ခံစားမှုနှင့် Emotion, 24 (5), 810-828။ Doi:https://doi.org/10.1080/02699930903047298 Crossref, Google Scholar
လောရင့်, အေဂျေ, တာဝန်, J., Bogdan, N. A., ဆာဟာရ ခဂျေ, & Clark က, L. (2009). အရက်-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူထကြွလွယ်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအတွက်ပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေရှယ်ယာလိုငွေပြမှု။ စွဲလမ်း (လို့ Abingdon, အင်္ဂလန်), 104 (6), 1006-10155။ Doi:https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2009.02533.x Crossref, Medline, Google Scholar
Leeman, R. F., & Potenza, အမ် N. (2012). တူညီခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အကြားကွဲပြားခြားနားမှု: Impulse နှင့် compulsive အပေါ်တစ်ဦးကအာရုံစိုက်။ Psychopharmacology, 219 (2), 469-490။ Doi:https://doi.org/10.1007/s00213-011-2550-7 Crossref, Medline, Google Scholar
Mechelmans, J. ဂျေ, Irvine, M., Blanca, P., ပေါ်တာ L., မစ်ချယ်, S., မှဲ့, တီခ, Lapa, T. R., Harrison, N. A., Potenza, အမ် N., & Voon, V. (2014). နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေမပါဘဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုဦးတည် Enhanced အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု။ PLoS တစ်ခုမှာ,9(8), e105476။ Doi:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0105476 Crossref, Medline, Google Scholar
Pekal, J., Laier, C., Snagowski, J., Stark, R., & ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, M. (2018). အင်တာနက်ညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုရောဂါဆီသို့သဘောထားတွေ: ညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှုဖို့အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်ကွာခြားချက်များ။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်,7(3), 574-583။ Doi:https://doi.org/10.1556/2006.7.2018.70 လင့်ခ်, Google Scholar
Petri, N. (2015) ။ အမူအကျင့်စှဲ: DSM-5® နှင့်ကျော်လွန်ပြီး။ နယူးယောက်, နယူးယော့: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်. Crossref, Google Scholar
Potenza, အမ် N. (2006). မမှန်သည် non-ပစ္စည်းဥစ္စာ-related အခြေအနေများပါဝင်သည် addictive သငျ့သလော စွဲ, 101 (S1), 142-151။ Doi:https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2006.01591.x Crossref, Medline, Google Scholar
Potenza, အမ် N. (2014). လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါအတွက်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များများ၏အာရုံကြောအခြေစိုက်စခန်းများ။ သိမှုသိပ္ပံအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း, 18 (8), 429-438။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.tics.2014.03.007 Crossref, Medline, Google Scholar
Potenza, အမ် N. (2017). Non-ပစ္စည်းဥစ္စာသို့မဟုတ်အပြုအမူစှဲခွငျးနှငျ့ ပတျသကျ. လက်တွေ့အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါထည့်သွင်းစဉ်းစား။ လက်တွေ့အာရုံကြောသိပ္ပံ, 19 (3) တွင်ဆွေးနွေးပွဲများ, 281-291. Medline, Google Scholar
Potenza, အမ် N. (2018). ဂိမ်းကစားခြင်းရောဂါနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောဂိမ်း ICD-11 အတွက်ပိုင်သလား? တစ်ဦးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူကစားနေစဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ရှိသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်တစ်ဦးဆေးရုံတင်ထားရလူနာရဲ့သေခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ထည့်သွင်းစဉ်းစား။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်,7(2), 206-207။ Doi:https://doi.org/10.1556/2006.7.2018.42 လင့်ခ်, Google Scholar
Rinck, M., & Becker က, အီးအက်စ် (2007). ပင့်ကူကိုကွောကျရှံ့ချဉ်းကပ်မှုနှင့်ရှောင်ရှားခြင်း။ အပြုအမူကုထုံးနှင့်စမ်းသပ်စိတ်ရောဂါကုသမှု, 38 (2) ၏ဂျာနယ်, 105-120။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2006.10.001 Crossref, Medline, Google Scholar
Schiebener, J., Laier, C., & ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, M. (2015). ညစ်ညမ်းအတူ flyer တဲ့? တစ်ဦး multitasking ကိုအခြေအနေမှာဘာတွေကိုသုံးရင်သို့မဟုတ်လစ်လျူရှုကျဘာစွဲလက္ခဏာတွေမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါသည်။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်,4(1), 14-21။ Doi:https://doi.org/10.1556/JBA.4.2015.1.5 လင့်ခ်, Google Scholar
Schoenmaker, T., Wiers, R. ဒဗလျူ, ဂျုံးစ်, ခတီ, ဘရုစ်, G., & Jansen, အေတီအမ် (2007). Re-လေ့ကျင့်ရေးအာရုံကိုအစဉ်အဆက်မရှိဘဲမိုးသည်းထန်စွာသောက်အတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုလျော့နည်းစေ။ စွဲ, 102 (3), 399-405။ Doi:https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2006.01718.x Crossref, Medline, Google Scholar
Snagowski, J., & ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, M. (2015). ပုံမှန်ဘာအသုံးပြုသူ့ Analog နမူနာအနေဖြင့်ရလဒ်များ: ဘာစွဲ၏ရောဂါလက္ခဏာများနှစ်ဦးစလုံးချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်ရှောင်ရှားညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှုချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ပညာအတွက်နယ်စပ်ဒေသ,6(653), 1-14။ Doi:https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00653 Medline, Google Scholar
Stacy, အေဒဗလျူ, & Wiers, R. ဒဗလျူ (2010). သွယ်ဝိုက်သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်စွဲ: ဝိရောဓိအပြုအမူကိုရှင်းပြဘို့တစ်ဦးက tool ကို။ လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏နှစ်ပတ်လည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း,6(1), 551-575။ Doi:https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.121208.131444 Crossref, Medline, Google Scholar
Stark, R., ကလူက T., Potenza, အမ် N., ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, M., & Strahler, J. (2018). အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါနှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏အမူအကျင့်မှ neuroscience ၏တစ်ဦးကလက်ရှိနားလည်မှု။ လက်ရှိအပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံအစီရင်ခံစာများ,5(4), 218-231။ Doi:https://doi.org/10.1007/s40473-018-0162-9 Crossref, Google Scholar
Stark, R., Kruse, O., Snagowski, J., ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, M., Walter ဟာ, B., ကလူက T., & Wehrum-Osinsky, S. (2017). အင်တာနက်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း (ပြဿနာ) ကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ခန့်မှန်း: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းဆီသို့ရိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်သွယ်ဝိုက်ချဉ်းကပ်လိုတဲ့သဘောထားကို၏အခန်းက္ပ။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်မသမာမှု၊ ၂၁ (၄)၊ 180-202။ Doi:https://doi.org/10.1080/10720162.2017.1329042 Crossref, Google Scholar
တီဖ်နီ, အက်စ်တီ, & Conklin, C. အေ (2000). အရက်တဏှာနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအရက်သေစာအသုံးပြုမှုတစ်ဦးကသိမြင်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့မော်ဒယ်။ စွဲ, 95 (8 ပျော့ပျောင်း။ 2), 145-153။ Doi:https://doi.org/10.1046/j.1360-0443.95.8s2.3.x Crossref, Medline, Google Scholar
Wiers, R. ဒဗလျူ, ဘာသာလို ခ D., ဗန်တွင်း Wildenberg, E., Thush, C., အိန်ဂျယ်, RCME, Sher ကေဂျေ, Grenard, J., အမ်မစ် အက်စ်အယ်လ်, & Stacy, အေဒဗလျူ (2007). automatic နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသောလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်မြီးကောင်ပေါက်များတွင်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု: တစ်ဦးကပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးမော်ဒယ်။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ, 86 (2), 263-283။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.pbb.2006.09.021 Crossref, Medline, Google Scholar
Wiers, R. ဒဗလျူ, Eberl, C., Rinck, M., Becker က, အီးအက်စ်, & Lindenmeyer J. (2011). အလိုအလျှောက်အရေးယူသဘောထားတွေ Retraining အရက်အဘို့အရက်လူနာ '' ချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုပြောင်းသွားနှင့်ကုသမှုရလဒ်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံ, 22 (4), 490-497။ Doi:https://doi.org/10.1177/0956797611400615 Crossref, Medline, Google Scholar
Wiers, R. ဒဗလျူ, Rinck, M., Dictus, M., & ဗန်တွင်း Wildenberg, E. (2009). အဆိုပါ OPRM1, G-allele ၏အထီးသယ်ဆောင်အတွက်အတော်လေးအားကြီးသောအလိုအလျှောက်အစာစားချင်စိတ်အရေးယူ-သဘောထားတွေ။ မျိုးဗီဇ, ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူ, 8 (1), 101-106။ Doi:https://doi.org/10.1111/j.1601-183X.2008.00454.x Crossref, Medline, Google Scholar
Wright, ပီဂျေ, တိုကနာနာ, R. S., & Kraus, A. (2016). ညစ်ညမ်း, ရိပ်မိသက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းများနှင့် condomless လိင်၏စားသုံးမှု။ ကနျြးမာရေးဆက်သွယ်ရေး, 31 (8), 954-963။ Doi:https://doi.org/10.1080/10410236.2015.1022936 Crossref, Medline, Google Scholar